Maitiro ekutevedzera mufananidzo kana vhidhiyo kubva pane reel pane iyo iPhone kana iPad | IPhone nhau
Chokwadi pane kanopfuura kamwe chiitiko iwe wakatora zvakasiyana zvakatorwa zvemufananidzo mumwe chete kuti ukwanise kuyedza uye kuyedza gare gare nemidziyo yekugadzirisa yeIOS Kana tichigadzirisa iyo yekutanga foto isu tinofanirwa kufunga kuti mhedzisiro yacho inozochengetwa pamufananidzo uri mubvunzo, saka kana tisina kopi yemufananidzo iwoyo hatigone kuutorazve, kunyanya kana takatoburitsa kubva kuchiteshi. Paunenge uchigadzirisa mufananidzo, iOS inoramba ichichengeta iyo yekutanga mufananidzo, chifananidzo chatinogona kupora nekugadzirisa mufananidzo zvakare uye nekudzokera kumaitiro epakutanga uye fomati.
Asi pane nzira iri nyore yekugona kugadzirisa zvakawanda sezvatinoda chero pikicha uye vhidhiyo, pasina kurasikirwa neyekutanga. iOS inotibvumidza kuti titeedzere chifananidzo chero chipi zvacho chatinacho pane mupumburu kuti tizobata nemidziyo yakasiyana yemifananidzo iyo iyo iOS neyechitatu-bato kunyorera kwavanotipa. Maitiro acho Zviri nyore kwazvo uye zvinongotora masekonzi mashoma.
Dzokorora mufananidzo kana vhidhiyo kubva pane kamera roll pane yako iPhone kana iPad
Kutanga isu tinofanirwa kuenda kumufananidzo kana vhidhiyo, iri pane reel, yatinoda kuita duplicate.
Tevere, tinya pane Bhatani bhatani, inomiririrwa nebhokisi rakavhurwa kumusoro nemuseve wepamusoro.
Mune menyu inozoratidzwa isu tine akati wandei sarudzo dzekuvhura iyo chifananidzo mune mamwe maapplication kana kuita mashandiro nayo. Mune ino kesi, isu tinofanirwa kuenda kune iyo Duplicate sarudzo.
Kana tangodzvanya paDhiupi, mufananidzo uri mubvunzo unobva wagadzira duplicate iri kumagumo kwereel.
Iyi sarudzo inoshandawo kana tichida kuita mufananidzo wemifananidzo kana mavhidhiyo pamwechete, pasina kuenda imwe neimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro Ekutevedzera Mufananidzo kana Vhidhiyo kubva kuKamera Roll pane iPhone kana iPad
sezvo ini ndichigona kudzima duplicate vhidhiyo, haina kundipa sarudzo yekuirasa kuti ndikwanise kuidzima, ndatenda.